कस्तो मासु खाँदा राम्रो त ! मासु खाँदा ध्यान दिनुस् यस्ता कुरा - Samachar PatiSamachar Pati
कस्तो मासु खाँदा राम्रो त ! मासु खाँदा ध्यान दिनुस् यस्ता कुरा
२८ चैत । मासु पोषिलो खाना हो। तर, धेरै खानाले यसले हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउँछ। नकारात्मक असर पर्छ। त्यसैले बिरामीले मात्र होइन, स्वस्थ व्यक्तिले पनि मासु खाँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
सासु भन्या त आमा पो परिछन्(भिडियो)
कति घन्टा सुत्दा शरिरलाई उपयुक्त हुन्छ